Andron’ny kabone: faritra Menabe madio no tarigetra | NewsMada
Andron’ny kabone: faritra Menabe madio no tarigetra
Nomarihina tany Morondava ny andro iraisam-pirenena ho an’ny toeram-pivoahana. Lohahevitra novoizina tamin’ny maha sarobidy ny fampiasanana lavapiringa ara-pahasalamana. Eto Madagasikara, 37,6% amin’ny mponina ihany no manana kabone manaraka ny fenitra ara-pahasalamana. Olona 7 amin’ny 10 kosa mbola mangery ankalamanjana, araka ny fanadihadiana ny taona 2018. Ny tatitra koa dia milaza fa mbola mangery ankalamanjana ny 80% amin’ny mponina ao Menabe ka izany indrindra no antony nanaovana ny hetsika tany an-toerana.
Tanjon’ny hetsika izay notanterahin’ny minisiteran’ny Rano niarahana tamin’ny fandaharanasa USAID Access ny hampandray anjara mivantana ny tompon’andraikitra ifotony sy ireo mponina amin’ny fanovana ny fitondran-tena ka hiala amin’ny fanaovana maloto ankalamanjana.
Kendrena amin’ny taona 2023 mba ho tratra ny fanentanana ny 90% amin’ny mponina hanana kabone sy hanaja ny fahadiovana. Maro ny tetikasa hatao hahatrarana ny tanjona miaraka amin’ireo tompon’andraikitra eny ifotony.
Anisan’ny mpiara-miombon’antoka amin’ny fanjakana malagasy amin’ny fampiroboroboana ny fahasalamana sy ny kalitaon’ny mponina ny USAID Access. Voalohany amin’izany ny fampananana rano fisotro madio, fahadiovana sy fidiovana…